Waddamadey ka soo jeedaan Meydadkii laga helay gaarigii UK - BBC News Somali
Pham Thi Tra My iyo Nguyen Dinh Luon
Booliska ayaa su'aalo weeydinaya afar qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen 39-kii qof ee meeydadkooda laga helay gudaha gaari xamuul ah oo ku suganaa magaalada Essex ee ku taallo koonfurta galbeed ee Ingiriska.
Nin ayaa Jimcihii lagu xifray eelaboorka Stansted ka dib markii looga shakiyay inuu yahay tahriibiye. Dhanka kale laba qof oo kale oo laga qabtay Warrington ayaa iyagana baaritaan la xiriira dadkaasi dhintay lagu wadaa iyadoo Arbacadina la xiray darawalkii waday gaarigii xamuulka ahaa ee ay dadu ku le'deen.
Dadkan la xiray ayaa waxay ku soo beegmeysa iyadoo weli uu socdo baadi goobka logu jiro heybta meydadka.
Ingiriiska: Meeydad badan oo laga helay gudaha gaari xamuul ah
Waxaa la aaminsanyahay in tiro ka mid ahaa dadkaasi dhamaaday ay ka yimaadeen Vietnam inkastoo markii hore ay booliska Essex sheegeen in dadkaasi ay ka soo jeedaan Shiinaha.
Bishii June ee sannadkii 2000, 58 muhaajiriin Shiinees ah ayaa laga helay gaari xamuul ah oo ku sugnaa Dover.
Qoysaska qaar ka mid ah dadkii gaariga saarnaa ayaa BBC-da la soo xiriiray.
Dhanka kalana Urur matala jaaliyadda Vietnamese-ka ee Britain ayaa sheegaya in loo soo diray ilaa 20 sawir oo la sheegay in la la'yahay haklii ay jaan iyo cirib dhigeen tan iyo markii koox muhaajiriin ah laga helay gudaha gaari xamuul ah.
Ururuka oo lagu magacabo VietHome ayaa sheegaya in sawirada loo soo diray ay da'doodu u dhaxeeyso 15 ilaa iyo 45 sano jir.